China Linear atc cnc router pabrik sy mpanamboatra | JCUT
1. Ny firafitry ny firafitry: ny firafitry ny vy rehetra dia miaraka miaraka, izay karakarain'ny fahanterana (fantsom-bolo), ary tsy misy fiovana taorian'ny fampiasana maharitra.
2. Taiwan Syntec ny rafitra fanaraha-mason'ny haino aman-jery vita amin'ny haino aman-jery, manana kalitao tsara, fikojakojana tsara, dia afaka mifehy ny fahavitan'ny fanodinana 3D misy haavo maro, vita fanodinana 3D, fanamboarana ary manapaka.
3. Ny môtô Spindle avy any Italie HSD avo lenta amin'ny herinaratra fanamainana fitaovana, avo tsara tsara, feo tsotra, hafainganam-pandeha avo, fiaina lava, fiasa malefaka mba hanomezana ny lalao feno ny milina lehiben'ny milina.
4. Ady voalohany nanafatra ny fijerena ny vatan-tsofina fahitana ny andiam-pandrefesana mitambatra, dia mety ho vita indray mandeha ny famoronana, ny fanapahana, ny sary sokitra, ny valan-tsibatra, ny fanalahidy ary ny fomba saro-takarina hafa amin'ny famokarana takelaka varavarana.
5. Japon Yaskawa servo dia mitondra hery amin'ny karazan-jiro mavesatra sy sokitra.
6. Ny mpitari-tsipika dia manamboatra ny mpitari-dalana lalam-batrafatra vita amin'ny zoro roa sy sakana efatra amin'ny tariby mihetsika, izay afaka mitondra entana mavesatra, mihazakazaka tsara ary mihazona fitoniana avo.
7. Ny rafitra fanovana ny fitaovana dia manaiky ny teknolojia efa mandroso iraisam-pirenena, izay afaka hanolo ny fitaovana ilaina amin'ny saina. Mety hahatratra 12-16 ny sela fitahirizana fitaovana.
8. Ny latabatra misy ny latabatra iraisam-pirenena be banga, ny fametahana ny latabatra bakelite, tsy misy fiovana, ny adsorption avo lenta, ny adsorption mahery vaika, ny latabatra milina ity miaraka amin'ny fantsom-bolo vita amin'ny famatsiana mandeha ho azy dia mora kokoa ny nanamboarana ny lozon'ny varavarana hidin-trano sy ny fanodinana ny andiany.
9. Fifanarahana rindrambaiko tsara: mifanaraka amin'ny MasterCAM, Type3, UG, AutoCAD, ArtCAM, Proe, JDpaint sy ny sisa.
1. Indostrian'ny fanaka:
Fitaovana fanaka, fanaka amam-baravarankely, kabinetra, lambam-birao, fanaka antitra ary karazana karazana fanaka tokana vita amin'ny felany voninkazo sy ny fanokafana keyhole amin'ny fanatanterahana indray mandeha.
2. Indostrian'ny haingo:
Karazan-tsipika marevaka, efijery, modely haingon-trano, onja onjam-taratra telo, tabilao manentana feo sy fanamboarana sokitra hafa.
3. Ny famarotana vokatra vita amin'ny famaranana vita amin'ny kojakoja vita amin'ny indostria:
Ny fanodinana lalina ny vokatra vita amin'ny semi-vita toy ny countertops ny milina fanjaitra indostrialy ary ny takelaka vita amin'ny fitaovana elektrika.
4. Indostrian'ny zavamaneno:
Ny fanodinana lohany gitara, ny fanodinana gitara vita vita ary ny modely isan-karazany ny sary sokitra anatiny Musical Instruments ary ny famokarana endrika vita amin'ny curam-telo.
5. Indostrian'ny lasantsy:
Famokarana fametahana vita amin'ny hazo, very fo amam-bika, bobongolo sakafo (toy ny: volavola mofomamy volana) sy ny bobongolo hafa.
6. Indostrian'ny asa tanana:
Famelomana asa tanana, sary sokitra sarimihetsika, pendant ny asa tanana, haingo an-tànana sy ny orinasan-tsarimihetsika hafa ary ny famokarana sary sokitra.
7. Manamboatra modely ara-maritrano
8. Orinasa dokambarotra:
Fametahana akrika sy sokitra, acrylic blister modely, ary marika maro isan-karazany ary famantarana ny sary sokitra sy ny famokarana.
Métera Cuting R8 CNC avo lenta
Gazety fitaovana 8 toeranao servo inline auto magazine changer magazine miaraka amin'ny sensor sensor
Motor Boky miloko Shanlong 1300W
Driver Mpamily servisy Shanlong
Rafitra fanaraha-maso Shanlong 3042 rehetra ao anaty rafitra fanaraha-maso iray
Cabinet Kabinetra lehibe
Reducer Japoney Shimpo reducer
Lanja afa-karatsaka 2800kg
Manaraka: Milina Atc fialantsasatra